Iminyaka Engazikhipha Ngayo Ngaphandle Ngenxa Yendodakazi Yami | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukubaleka “Emphandwini Wengwe”
Udwani Lotshani Olwakhula Phakathi Kwamajikijolo
uYang Yuqing, eJapan
Ngazalelwa edolobhaneni elincane eChina, futhi ngakhulela lapho ngiphila impilo ejwayelekile, nelula. Ngenxa yokuthi umndeni wami wawumpofu, kwadingeka ngiyosebenza edolobheni elikhulu ngemuva kokuqeda ibanga labancane lesikole esiphakeme lapho ngineminyaka eyi-16. Ngenkathi ngineminyaka eyi-17, ngahlangana nomyeni wami esesahlukana naye, omdala kimi ngeminyaka eyi-12. Ngaleso sikhathi, ukungikhathalela nothando angibonisa khona kwakufana nothando nokungivikela engangikuboniswe ngubaba kanye nomfowethu omdala. Ngangizizwa nginenhlanhla kakhulu ngokuba ngihlangane naye, futhi ngangihlala ngibonga nsuku zonke ngezibusiso zami. Ngelinye ilanga, unina wafika ngenhloso yokuzongibona. Ngangicabanga ukuthi uzojabula ukungibona, ngakho-ke ngamangala lapho, uma engibona ukuthi ngangimuhle futhi ngimncane kakhulu kunendodana yakhe, ngokushesha waba nezinsolo zokuthi nganginezinhloso ezingezinhle ngokuthandana nayo. Phambi kwami, wathi endodaneni yakhe: "Awusabi yini ukuthi unezinhloso ezithile anazo ngawe?" Ngazizwa ngidangele futhi ngithukuthele ukumuzwa ekhuluma kanjalo, futhi ngaphelelwa nangamazwi. Umyeni wami waphendula ngezwi elithukuthele: "Mama, uma ucabanga ukuthi ungasehlukanisa ungavele uhambe kwamanje!" Ngamangala ukumuzwa ekhuluma ngalolu hlobo. Wayekade elokhu ebonakala engumuntu omnene, kodwa manje wayethukuthelele unina ukuze avikele ubudlelwane bethu. Kwangithinta kakhulu lokhu, futhi ngacabanga ukuthi kwakusho ukuthi uthando lwakhe ngami lwalungolwangempela nokuthi ngase ngithole uthando lwangempela. Ngokuhamba kwesikhathi, saba nendodakazi, nakuba abazali bami babengahambisani nalokhu. Kodwa, okwangimangaza kakhulu, ukuthi eminyakeni nje embalwa waphenduka umuntu owehlukile ngokuphelele. Waqala ukuphuza, ukuphinga nokugembula, esikhathini esingengakanani wabe eseyishaye wayibhuqa imadlana esasiyibekile futhi waze wasifaka nasezikweletini. Sengingasazi nokuthi ngenzenjani, ngahambisa indodakazi yethu kumamezala ukuze ayinakekele ukuze ngihambe ngiyozama umsebenzi ukuze ngenze imali ngikhokhele izikweletu. Kodwa kungakhathaleki ukuthi ngangisebenza kanzima kangakanani, kungakhathaleki ukuthi ngangenza imali engakanani, wayeyithatha ahambe ayoyigembula. Sagcina sixabana nsuku zonke futhi ekugcineni ngangingasakwazi ukubekezelela lokhu ngahamba ekhaya lethu. Ekuqaleni ngangifuna ukuyithatha indodakazi yethu ngihambe nayo ngiye kude nakule ndawo eyayingizwise ubuhlungu obungaka, kodwa umyeni wami akazange akuvume. Wathi uyonginika indodakazi yethu kuphela uma ngimnika u-200,000 RMB.
Ngangikhathazekile ngokuthi lapho ngihamba, umyeni wami wayezosala ethola omunye umlingani nokuthi indodakazi yami yayizoxhashazwa nguye. Ngangifuna futhi ukuyithatha indodakazi yami ukuze ngiyifake esikoleni esingcono futhi ngiyinike imfundo ephambili nekusasa eliqhakazile. Ngakho ngavuma ukukhokhela umyeni wami u-200,000 RMB. Kodwa ngangingenayo enye indlela yokuthola imali engako ngokushesha, ngakho ngaqala ukusebenza kanzima ngakho konke okusemandleni ukuze ngithole imali. Kwakungalesi sikhathi lapho umama nodadewethu omdala bobabili bamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Futhi bangikhuthaza ukuba ngikholwe kuNkulunkulu futhi ngithembele kuNkulunkulu, kodwa ngangingenayo intshisekelo njengoba konke engangikukhathalele kwakungukuhlanganisa u-200 000 RMB ngokushesha ngokunokwenzeka ukuze ngiphinde ngithole indodakazi yami. Ngakho ngangilokhu ngenqaba ukulalela ivangeli ngilokhu ngigxile ekwenzeni imali. Kodwa engingakaze ngikucabange ukuthi lapho sengiwuhlanganisile u-200 000 RMB kodwa umyeni wami wenqaba ukunginika indodakazi yethu kunalokho wathi ufuna u-500,000 RMB, futhi wazama ukusekela lobu bugovu bakhe ngazo zonke izinhlobo zezizathu.
Ngenxa yokungakwazi ukuthola indodakazi yami ngaqala ukuphuza nsuku zonke ukuze ngikhohlwe izinsizi zami futhi ngase ngiyisidumbu esihambayo nje. Kodwa ukuze indodakazi yami ibe nekusasa elihle, ngaphinda ngavumelana nemigomo yomyeni wami futhi ngaqala umzabalazo wokufinyelela ku-500,000 RMB. Ngaba yisigqila semali ngokuphelele, futhi ngasebenza ubusuku nemini. Kwaba ngalesi sikhathi lapho ngathola khona umsebenzi endaweni yokudlela yaseJaphane, futhi yilapho engathola khona umyeni wami wamanje. Ngenxa yendlela umyeni wami wangaphambili ayengizwise ngayo ubuhlungu, ngase ngilahlekelwe yithemba lokuthi ngingaphinde ngishade. Kodwa indoda yami entsha yayimnene futhi inomusa, futhi yayingenandaba nokuthi nginengane, ngakho ngashada naye ngase ngiyohlala naye eJaphane. Emuva kokufika eJaphane, indodakazi yami, icabanga ukuthi angifuni ukuba nayo, yaqala ukungifonela nsuku zonke. Yayikhala ocingweni ithi iyangizonda nokuthi ngingumama ongalungile. Amazwi endodakazi yami ayefana nommese ophenduphendulwa enhliziyweni yami. Engangifuna ukukusho kwakungukuthi: "Kungani ungaqondi ukuthi ngizizwa kanjani? Akusikho ukuthi angikufuni. Uyihlo ngeke angivumele ngikuthathe." Ngaleso sikhathi, ngazithembisa ukuthi ngizoyithola indodakazi yami. Emuva kwalokho, ngaqala ukusebenza nakanzima kunakuqala, futhi ayikho enye into engangiyicabanga ngaphandle kwemali nendodakazi yami: Kwakudingeka ngifinyelele emgomweni ka-500,000 RMB ukuze ngikwazi ukuletha indodakazi yami izohlala eJaphane. Kodwa ekugcineni lapho sengiyihlanganisile imali sengicela uyise ukuba angithumelele imininingwane yakhe ye-akhawunti yasebhange ukuze ngimfakele imali, wathi yena ufuna u-1 million RMB. Ukukhohlisa komyeni wami kwangidabukisa kakhulu. Ngacabanga ngokuthi ngangizikhandle kangakanani eminyakeni edlule ukuze ngibuyise indodakazi yami, kodwa konke engangikutholile kwakuyinkohliso nobuhlungu. Eqinisweni, ngangizikhandle ngokweqile kangangokuthi engangikudinga manje kwakuwuhlala ekhaya ngilulame. Lapho ngicabanga ngokwengeziwe ngalokhu, ngangifuthelana ngokwengeziwe yintukuthelo. Ngangigcwele intukuthelo, ngiyizwa impilo inomunyu futhi ikhathaza ...
Kwakungalesi sikhathi lapho umama nodadewethu omdala baphinde bangikhuthaza ukuba ngikholwe kuNkulunkulu futhi ngithembele kuNkulunkulu, kodwa ngangisaphithene udaba lwendodakazi yami futhi ngangingenantshisekelo nalokho. U-2015 wafika, kodwa ngangingakayitholi indodakazi yami. Ngivakashele eChina ngalowo nyaka umama waphinde wazama ukungikhuthaza ukuba ngikholwe futhi ngithembele kuNkulunkulu ngiyeke ukuphikisana nesimiselo sami. Umama wathi: "Isimiselo sabantu bonke abaphilayo sisezandleni zikaNkulunkulu. Ulokhu uqhubeka nokuphikisana noNkulunkulu futhi wenqaba insindiso kaNkulunkulu. Ufuna ukuzilawulela ikusasa lakho ngokwakho, kodwa lokhu kuzokwenza ukuthi uhlupheke nakakhulu. Selokhu kwaphela umshado wakho usindiso lukaNkulunkulu lulokhu lukulindele, kodwa wena uyaphikelela ufuna ukuzenzela izinto ngendlela yakho. Ucabanga ukuthi udinga imali kuphela ukuze ubuyelwe yindodakazi yakho, kodwa pho usukwazile ukuyithola-ke? Uhlupheke yonke le minyaka, wazuzani ke? Ingabe isifiso sakho sigcwalisekile? Kumele ngempela ucabangisise ukuthi ngabe izifiso zethu zisezandleni zethu na noma cha. Kholwa futhi wethembele kuNkulunkulu! NguNkulunkulu kuphela ongakusindisa!" Emuva kokusho konke lokhu, umama wangifundela isiqephu samazwi kaNkulunkulu uSomandla: “Uma umbono womuntu ngobukhosi bukaNkulunkulu ekudalelweni kwabantu uphile kahle, khona-ke lapho umuntu ebheka uhambo aseluhambile, lapho esehambisana nobukhosi bukaNkulunkulu, uba nesifiso sangempela sokuzithoba kuyo yonke into uNkulunkulu ayihlelile, uyozimisela ngempela ukuvumela uNkulunkulu aqondise ukudalelwa kwakhe, ayeke ukuhlubuka kuNkulunkulu. Ngoba uyobona ukuthi lapho umuntu engaqondi ukudalelwa, ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi lapho engabambisani nakho ngokuphelele, kuyoba nenkungu uhambo lube nzima futhi lwephule inhliziyo. Ngakho lapho abantu beqaphela ubukhosi bukaNkulunkulu ngokudalelwa komuntu, abahlakaniphile bakhetha ukubazi nokubemukela, bashiya izinsuku ezibuhlungu ababezama ngazo ukwenza ukuphila kube ngcono ngezandla zabo zombili, kunokuqhubeka bemelana nokudalelwa, benza lokho okungabizwa ngemigomo yokuphila ngendlela yabo. Lapho umuntu engenaye uNkulunkulu, lapho engakwazi ukumbona, lapho engabuboni ngokucacile ubukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinsuku azisho lutho, azizuzisi futhi zibanga usizi. Kungakhathaliseki ukuthi umuntu unjani, usebenzaphi, uphila kanjani, noma imigomo yakhe imenza aphukelwe inhliziyo futhi ahlupheke, lowo muntu ngeke akwazi ukubheka emuva. Kulapho kuphela emukela khona ubukhosi boMdali, lapho emukela ukuqondisa namalungiselelo Akhe, futhi efuna ukuphila kwangempela komuntu, lapho eyokhululeka khona kancane kancane ekuhluphekeni nasezinkathazweni zokuphila” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Lawa mazwi kaNkulunkulu ayithinta ngempela inhliziyo yami, zabuya zonke izithombe zami ngizikhandlela indodakazi yami. Yonke le minyaka ngangilokhu ngilawulwa yimizwa yami “kodwa ngiphikelele phambili ngenkani.” Ngenxa yendodakazi yami nganginikele ngakho konke ukuze nje ngenze imali, ngingami nhlobo ukuze ngiphumule. Ngangibekezelele ukucindezeleka okukhulu emsebenzini, ukuhlukunyezwa umyeni wami okungenangqondo, ukungaqondi kahle kwendodakazi yami, nokulangazelela kwami nokukhathazeka ngayo. Konke lokhu kwakungicindezele emzimbeni nasengqondweni, futhi yimina kuphela owayazi ukuthi lwalujule kangakanani lolu sizi, ubuhlungu, nokuhlupheka. Manje, uNkulunkulu uSomandla wayengichazela umthombo nesimo sobuhlungu bami ngokungacacelwa okukhulu, futhi ekugcineni ngase ngiqonda ukuthi isizathu sokukhungatheka nobuhlungu bami kwakungukuthi ngangingazi ukuthi ubani olawula ikusasa lawo wonke umuntu ophilayo. Ngaso sonke isikhathi ngangifuna ukwethembela kweyami imizamo ukuze ngiphucule isimiselo sendodakazi yami, kodwa phezu kwayo yonke imizamo yami angizuzanga lutho. Konke engakwenza kwaba ukuzihluphekisa nje, futhi ngagcina nginemizizima futhi ngizibazibazi. Ngaleso sikhathi, ngazicabangela ngathi: "Akufanele yini ngike ngime isikhashana ngibuke emuva impilo yami kuze kufike manje? Akufanele yini nginikeze ukulawulwa kwekusasa lami kuNkulunkulu futhi ngithobele noma yini angihlelela yona? Kufanele ngibheke kuphi uma ngisuka lapha? Ingabe umoya wami uzogcina uthole kuphi ichweba eliphephile lapho uzohlala khona futhi uphumule? "
Ngesikhathi ngisacabanga ngalokhu umama wathi kimi: "Ake sibuke ndawonye ibhayisikobho yevangeli ethi Ngabamba Isitimela Sokugcina. Sithandwa, manje sisenkathini yezinsuku zokugcina futhi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina ungumsebenzi kaNkulunkulu wesigaba sokugcina wokusindisa isintu. Ngaphezu kwalokho, manje sesibala okokugcina, isitimela sokugcina sesizophuma esiteshini, ngakho-ke kufanele wenze umzamo wokuphenya konke lokhu. Mina nodadewenu besilokhu sizama ukushumayela ivangeli kuwe eminyakeni embalwa edlule, kodwa bewulokhu uphithene ngokwenza imali ngakho-ke awuzange uzikhathaze ngokufuna noma ukuphenya ngendlela yangempela. Kodwa bheka ukuthi konke ukuzizamela kwakho kukuletheleni: ubuhlungu obukhulu nokuhlupheka futhi akunanzuzo ongayikhomba ngakho. Konke lokhu kuyisithelo esibabayo sokungayamukeli insindiso kaNkulunkulu esikhundleni salokho ukuphila ngaphansi kokubusa kukaSathane nokonaliswa uSathane. Kungokuza phambi kukaNkulunkulu nokwamukela insindiso kaNkulunkulu kuphela lapho kuyoba nethemba khona empilweni yakho yonke!" Emuva kokuzwa lokho, ngaqala ukubukela ibhayisikobho ngokuzimisela. Kubhayisikobho kwakukhulunywa kakhulu ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi angazi kungani kodwa ngakwazi ukukuqonda konke nakuba ngangingakaze ngizinikeze isikhathi sokukholwa kuNkulunkulu. Okwangikhuthaza kakhulu ukulalela iqhawe lomdlalo lichaza inqubo yokuthi lalisuke kanjani ekwenqabeni umsebenzi kaNkulunkulu lafika ekwamukeleni ivangeli. Ukubuka kwalo emuva kanye nolwazi lwalo kwahambisana nami, futhi kwangithinta ngaze ngakhala izinyembezi ngenxa yokuzisola. Ngangizizwa ngempela njengengane eyihlongandlebe, njengalo iqhawe lendaba. Isikhathi nesikhathi ngangiyenqabile insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina futhi ngaqhubeka nokuthembela kimina kuphela njengoba ngangikuzwa konke ukubaba engangikufunzwa umhlaba. Ngangingakaze ngijabulele ukuthula nenjabulo yangempela, futhi manje ngase ngizisola ngokuthi kungani ngingazange ngiwamukele kudala umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ukubuka ibhayisikobho kwakunjengokuvukela kuleli qiniso, futhi nganquma khona lapho ukuthi ngangizoba kulesi sitimela sokugcina, ukuthi ngangizolandela futhi ngithembele kuNkulunkulu uSomandla, hhayi ukuba ngivele ngithembele kwezami izandla zombili ukuba ngizilwele. Ngenxa yokuthi manje ngase ngazi ukuthi ngiyisidalwa sikaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyena olawula zonke izingxenye zokuphila kwami. UNkulunkulu kuphela onamandla okuguqula isiphetho sami futhi manje sengizimisele ukuza phambi kukaNkulunkulu, futhi ngamukele uNkulunkulu uSomandla njengeNkosi yami noNkulunkulu wami!
Kungekudala ngemuva kokubuyela eJaphane, ngangena ekuphileni eBandleni LikaNkulunkulu USomandla. Lapho ngibona kuwebhusayithi yebandla kanye nokubuka amavidiyo abo ukuthi kwakunabanye abafowethu nodade abaningi kangaka eJaphane nasemhlabeni jikelele, ngamangala. Ngangingalindele ngempela ukubona ukuthi kwakunamakholwa amaningi kangaka kuNkulunkulu uSomandla, nokuthi ezinye izizwe eziningi ezifana neCanada, iMelika, iSouth Korea, njll. bonke babenamagatsha eBandla LikaNkulunkulu USomandla. Ivangeli lombuso kaNkulunkulu lalibonakala lisabalala kuwo wonke amagumbi amane omhlaba, futhi lolu lwazi lwangenza ngaqiniseka nakakhulu ukuthi ngangigibele "isitimela sokugcina." Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungangiphathi ngokubuka ukuziphatha kwami kokungalaleli, ngokunginika amathuba amaningana okungisindisa, nokungibuyisela endlini kaNkulunkulu. Angazi ukuthi ngangifaneleke kanjani umusa kaNkulunkulu, ngakho-ke ngazithembisa ukuthi ngizothola ukuzimisela ukulandela uNkulunkulu uSomandla kusukela manje ngaphandle kokuwa.
Kamuva, emuva kokuphila impilo yasebandleni nokufunda amazwi kaNkulunkulu isikhathi eside, ngathola ukuqonda kahle ukuthi ungakanani umzamo ofakwa ensindisweni yomuntu ngamunye nguNkulunkulu. Ngaphinde ngaqonda kangcono imiphumela elimazayo yenkohlakalo kaSathane kubantu. Ngafunda la mazwi kaNkulunkulu: “Abantu abaningi baphila ezweni elingcolile likaSathane, futhi liyabalulaza; libahlupha ngezindlela eziningi kuze kube yilapho kuphila khona ingxenye kubo, babekezelela zonke izinguquko, nabo bonke ubunzima emhlabeni. Ngemva kokudlala ngabo, uSathane uyaqeda ngekusasa labo. Ngakho abantu badideka ukuphila kwabo konke, abakaze bajabulele izinto uNkulunkulu abalungiselele zona, kodwa kunalokho balinyazwa uSathane, abashiye bemanaphanapha. Namhlanje bakhandlekile futhi abanamandla ngezinga lokuthi abanaso nesincane isifiso sokubona umsebenzi kaNkulunkulu” (“Umsebenzi Nokungena (1)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Umuntu ngeke akwazi ukukhetha abantu noma izimo ezimakhayo nezithonya ukukhula kwakhe. Akakwazi ukukhetha ukuthi yiluphi ulwazi noma iziphiwo aba nazo, yimiphi imikhuba aba nayo. Akazikhetheli abazali nezihlobo zakhe, indawo azokhulela kuyo; futhi ubudlelwane bakhe nabantu, izehlakalo nezinto ezimzungezile, kanye nendlela ezithonya ngayo ukukhula kwakhe, zonke lezi kuyizinto ezingaphezu kwamandla akhe. Kanti ubani owenza izinqumo ngalezi zinto? Ubani ozihlelayo? Njengoba abantu kungebona abanqumayo, njengoba bengeke bazikhethele kulezi zinto, futhi njengoba bengakwazi ukuphoqa imizimba yabo ukuba izenze ngokwemvelo, kusobala ukuthi zonke lezi zinto zisezandleni zoMdali. Njengoba nje uMdali ehlela izimo ezithile zokuzalwa kwawo wonke umuntu, uhlela futhi nezimo ezithile umuntu azokhula ngaphansi kwazo. Uma ukuzalwa komuntu kuletha ushintsho kumuntu, ezehlakalweni, nasezintweni ezimzungezile, ukukhula kwalowo muntu kuyothinta nabanye ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, abanye abantu bazalelwe emindenini ehluphekayo, kodwa bakhula bezungezwe umcebo; abanye bakhulela emindenini echumayo kodwa kwenzeke ukuba lowo mcebo womndeni wabo uwe, ngezinga lokuthi baze bakhulela enhluphekweni. Akukho ukuzalwa komuntu okuqondiswa umthetho ongenakushintsha, akekho okhulela ezimweni ezingenakugwemeka, izimo ezihlelwe ngaphambi kwesikhathi. Lezi akuzona izinto umuntu angaba nazo noma angazilawula; zibangelwa ukudalelwa komuntu, futhi zinqunywe ukudalelwa komuntu. Yebo, okubalulekile ukuthi zinqunywe ngaphambi kwesikhathi uMdali ukuba zibe ukudalelwa komuntu, zinqunyelwe kusengaphambili ubukhosi boMdali, nezinhlelo Zakhe, ukuba zibe ukudalelwa komuntu” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” kwethi Izwi Livela Lisenyameni).
Ngiyabonga Nkulunkulu! Amazwi kaNkulunkulu akhulunywe ngokungokoqobo. Ikusasa lawo wonke umuntu ophilayo lisezandleni zikaNkulunkulu. Izimo esizalwe ngaphansi kwazo nokukhula kwethu sifinyelele ebudaleni, konke akukho sezandleni zethu. Kufana nesikhathi ngicabanga ukuthi ngithole uthando lwangempela kumyeni wami wokuqala futhi ngicabanga ukuthi siyojabula ndawonye impilo yethu yonke, kodwa-ke, eminyakeni nje embalwa, impilo yami yaphenduka yaba buhlungu futhi yaba muncu ngokungabekezeleleki. Ukuze ngithole indodakazi yami, ngangithembele ekuzikhandleni kwami ukuze ngithuthukise isimiselo lendodakazi yami. Ngangikholwe ukuthi njengoba umyeni wami wokuqala wayejwayele ukuphuza, ukuphinga nokugembula, indodakazi yami nayo nakanjani yayizolandela ezinyathelweni zakhe, nokuthi kwakungumsebenzi wami ukuyinika indawo eyikhaya elingcono nemfundo engcono. Ngangifuna ukuba ibe yisifundiswa futhi iphucuzeke ukuze ikwazi ukuba utho empilweni lapho ikhula. Futhi yize noma ngangivumelane nezimfuno zomyeni wami wokuqala njalonjalo, kodwa ngangingakayitholi indodakazi yami futhi ngingakakwazi ukuyikhulisa ibe ngumuntu omdala. Indodakazi yami manje isineminyaka engu-15 ubudala, kodwa ayikacoshi nowodwa wemikhuba emibi yomyeni wami wokuqala, futhi empeleni iya ngokuya ihlakanipha usuku nosuku. Impilo inginike bonke ubufakazi engibudingayo ukuze ngazi ukuthi akekho umuntu ongaguqula isiphetho lakhe, abazali abakwazi ukuguqula isiphetho sezingane zabo, futhi izimo esiphila kuzo nazo azidlali ndawo yokuthatha izinqumo. Isiphetho sawo wonke umuntu ophilayo sihlelwa futhi silawulwe nguNkulunkulu. Ukufunda la mazwi kwangisiza ngabona ukuthi yonke le minyaka engayichithangethembele emandleni ami futhi ngizidela ngenxa yendodakazi yami kwakunguSathane nje edlala ngami futhi engihluphekisa. Ngithe uma ngibona amalungiselelo kaNkulunkulu nokulawula esiphethweni sesintu, kwaba sengathi kunesisindo esisuswe enhliziyweni yami. Angizange ngisamzonda umyeni wami wokuqala, futhi ngabona ukuthi ukuthola indodakazi yami, ikusasa layo, nokuthi ngabe iyokwazi yini ukuzohlala eJaphane kwakusezandleni zikaNkulunkulu. Nginikela indodakazi yami kuNkulunkulu ukuba kube Nguye onquma ukuthi uzokwenzani ngayo.
Angikaze ngilindele ukuthi ngokushesha nje emuva kokuba indlela yami yokubuka izinto isiguqulile kancane izimo ezingizungezile nazoo zaqala ukuguquka. Indodakazi yami nami sesisondelene kakhulu: Yayeka ukungifuna imali futhi yaqala ukubonisa ukukhathazeka ngenhlalakahle yami; Ngabuye ngaqala nokuxoxa nayo ngayitshela indlela engangizizwa ngayo ngempela. Kulezo zikhathi lapho ngiyinika khona imali yayiphendula ithi: "Ngiseyingane, ngakho unganginiki imali eningi ngoba angikakwazi ukuzilawula ngokwanele. Lapho sengiyisebenzisile futhi ngidinga enye ngizokutshela. Unakekele impilo yakho, futhi ungazikhathazi ngami ngoba sengimdala ngokwanele ukuba ngizinakekele." Kimina, ukuqonda kwendodakazi yami kwakuyinto enhle kakhulu engangingayithola, futhi ngangazi ukuthi lokhu kwakunguNkulunkulu engifudumeza ngothando Lwakhe. UNkulunkulu uyazi ukuthi indodakazi yami yinto engizohlala ngiyikhathalela ngaso sonke isikhathi, futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihawukela futhi angibheke. Lesi futhi kwaba yisikhathi lapho ngashumayela khona ivangeli kumyeni wami, naye futhi waqonda umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, wawamukela ngenjabulo, futhi waqala impilo yakhe yasebandleni. Manje, ngenxa yokuhola nokuqondisa kukaNkulunkulu, siphila impilo enenjabulo nebusisekile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uSomandla ngokungisindisa! Iculo elangithinta ngokujule kakhulu yileli elithi "O Nkulunkulu, O Nkulunkulu othandeka kakhulu": "O Nkulunkulu, O Nkulunkulu, O Nkulunkulu othandeka kakhulu! Ngikhulile emazwini okuphila onginike wona. Ungifundise ukuhamba nendlela yokuzwa amazwi Akho. Isihe Sakho nokuvikelwa kungenza ngihambe endleleni eya embusweni. O Nkulunkulu, O Nkulunkulu, O uNkulunkulu othandekayo! Ungisindisile emhlabeni onesithukuthezi wangiletha ekhaya, wangiletha endlini kaNkulunkulu. O Nkulunkulu, O Nkulunkulu, O uNkulunkulu othandekayo! Uyakhathazeka kakhulu ngempilo yami futhi ufuna ngikhule ngokushesha futhi ngifeze uguquko esimweni sempilo yami ukuze ngikwazi ukufeza ngokwethembeka imisebenzi yami futhi ngikwenelise. O Nkulunkulu, O Nkulunkulu, O uNkulunkulu othandekayo! Uthando Lwakho luyangiqhuba ukuba ngikulandele kuze kube phakade. O Nkulunkulu, O Nkulunkulu, O uNkulunkulu othandekayo! Uthando lwakho luyangiqhuba ukuba ngikulandele kuze kube phakade, ngikhonze Wena kukho konke ukuphila kwami, ngikhonze Wena impilo yami yonke."
Okwedlule：Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala
ULi Fang, EChina Ngokwindla wango-2002, uDadewethu uZhao ovela ehlelweni lami, iBandla Leqiniso, waletha umshana wakhe, uDadewethu uWang, ekhaya…
UGangqiang e-USA Ngo-2007, ngenxa yengcindezi eningi empilweni yami ngazifikela ngokwami eSingapore ukuze ngisebenze ngizokwazi ukuziphil…
UNovo ePhillippines Igama lami nginguNovo, ngingumFiliphi. Kusela ngisemncane, ngangikholwa uNkulunkulu nomama wami. Ngangiya enkonzweni nabafowethu n…
USu Jie, eChina Ngelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje lapho ngiyibo…